Zlatan, Toure Iyo de Bruyne Oo Hogaaminaya Shaxda Kooxda Ugu Fiican Isbuucaan Horyaalka Ingiriiska Iyada Oo Aan Laba Sugin Kulanka Merseyside Derby – Tusmoonline.com
Zlatan, Toure Iyo de Bruyne Oo Hogaaminaya Shaxda Kooxda Ugu Fiican Isbuucaan Horyaalka Ingiriiska Iyada Oo Aan Laba Sugin Kulanka Merseyside Derby
Ciyaaro Wararka	December 19, 2016	132	Like
Shabakadda Caalamiga ah ee Goal.com ayaa soo saartay shaxda kooxa ugu fiican horyaalka Ingiriiska todobaadkaan inakstoo caawa uu jiro mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan todobaadkaan waana marka ay is fooda is daraan Everton iyo Liverpool.
Shaxdaan wey ka madax banaan tahay Merseyside Derby, waxaana lagu saleeyay 9-kii kulan ee kale kuwaas oo la ciyaaray Sabti iyo Axad.
Labada Manchester ayaa qabsaday shaxda kuwaas oo wadar ahaan ku yeeshay Shan Xidig, halka Blues ay ku yeelatay shaxdaan hal xidig waana daafaca ugu adag safka dambe Cesar Azpilicueta.
Goolhaye waxaa loo doortay isbuucaan Darren Rondolph kaas sameeyay badbaadii ugu badneed isbuucaan, madama uu afar kubad oo halis ah badbaadiyay sidoo kale waxey aheed in birta West Ham loo doorto madama in ka badan Randolph ay badbaado sameysay ciyaartii ay 1-0 kaga farxasheen wiilasha Slaven Billic dhigooda Hull City.
Dhanka kale Yaya Toure iyo Kevin de Bruyne ayaa qeyb ka geystay guushii ay Manchester City ka heshay Arsenal kulankii ka dhacay Etihad Stadium.
Marcos Rojo ayaa kusoo baxay daafac ma shalaaye ah madama uu adkeystay booskiisa sidoo kalana wuxuu kooxdiisa ka saaciday iney sadex kulan oo xiriir ah guuleysato, Zlatan Ibrahimovic ayaa ah mid kale oo magaciisa lasoo qaadan karo madama uu 11-gool dhaliyay xagaagan sidoo kalana uu dhaliyay labada gool ee ay United ku dhaafta West Brom sabtidii.